Herinaratra sy famatsian-drano Miandry politikam-pampandrosoana mahomby
Sehatra mafàna amin'izao fotoana izao ny delestazy sy ny fahatapahan-drano maharitra.
Tena manaratsy endrika ny fitondrana izay nampanantena fanarenana sy fandrosoana eto amin'ny firenena. Tsara ilay hoe "manana finiavana" hanova zavatra saingy tsy ampy izany satria mila vahaolana mahomby ahafahana manarina ny orinasa JIRAMA. Ny zava-doza mantsy dia miantraika mivantana any amin'ny vahoaka ny tsy fahaizana mitantana an'ity orinasam-panjakana ity. Ny fahasorenana teo amin'ny mpanjifa aza moa dia nivadika ho fitokonana sy fidinana an-dalambe. Niandry ny vahoaka nitroatra moa ny fitondrana vao nijery ifotony ny momba ity orinasa ity. Ny fepetra noraisina voalohany dia ny fanesorana ny tale jeneraly. Tsy olona iray angamba no olana eo anivon'ny JIRAMA fa ny rafitra ao aminy mihitsy. Ny minisitry ny angovo moa dia nilaza hatrany fa mivonona hanarina ity orinasam-panjakana ity ny tenany sy ny ekipany farafahatarany amin'ny faran'ny taona. Sehatra tsy hanaovana tsinontsinona ny herinaratra sy rano fisotro madio satria anisan'ny miahy ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka. Miandry ny politika izay miankina indrindra amin'ny fitondram-panjakana.